यी हुन् कालोब’जारीका ठूला माछा जे’लमा कोच्ने प्र’हरी…उहाँलाई सम्मानको लागि एक सेयर गरौँ ।
काठमाडौं : देश को’रोना भा’इरस(कोभिड १९) सँग जुधि’रहेको बेलामा मेडिकल साम’ग्रीको का’लोब’जारी भइरहेको सूच’ना पाएपछि अ’पराध अनु’सन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुलबहादुर थापा ग’म्भीर भए । शंकर ग्रुपका संचा’लक सुलभ अग्रवालले को’रोना भए नभएको ज्व’रो नाप्ने थर्मो’गन १६ हजार रुपैयाँमा बि’क्री गरिरहेको सूचना थापाले कुनै माध्यमबाट आइतबार पाएका थिए । ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने थर्मोगनको १६ हजार र ३ सयमा पाइने एन नाइन फाइभ मास्कको ९ सयसम्ममा बि’क्री गरिरहेको सूच’ना उनले पाए ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका एक पदाधिकारीले थर्मो’गन खोजी गर्दै जाने क्र’ममा त्रिपुरेश्वका सर्जि’कलहरु चाहारे । उनलाई कसैले त्रिपुरेश्वरको कृष्ण इन्टर’प्राइजेजमा पाइन्छ भनेपछि उनी त्यस सर्जिकलमा पुगे । उक्त इन्टरप्रा’इजेजका संचा’लक सपना अग्रवाल र संजय अग्रवालले २२ हजारमा थर्मोगन उ’पलब्ध गराउनसक्ने बताए । ३ हजार ५ सयमा पाइने थर्मो’गनलाई २२ हजार कसरी तिर्ने ?
उनले यसो भन्दा अग्रवालले भनेका थिए रे ‘हामीले जगदम्बाबाट १६ हजारमा ल्याएको, त्यत्रो लगानी गरेपछि ६ हजार त मुनाफा खानुपर्यो नि ? ’ उनी पुनः विशाल सर्जिकलमा गए । बिशाल स’र्जिकल कन्स’र्नमा पनि पाइन्छ भनेर भनेका त्यहाँ गए । उक्त स’र्जिकलका संचालक एबी भण्डारीले पनि २२ हजार तिर्ने भए उपलब्ध गराउन सक्ने बताए । उनी पुनः तिरुपति स’र्जिकलमा गए, तिरुपतिले पनि कृष्ण र विशालकै जस्तो २२ हजार पर्ने कुरा सुनाए ।
म’हामा’रीमा यस्तो लु’ट गर्न लागेकाले उनले अ’सह्य भएर कुनै माध्यमबाट अ’पराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी थापाकोमा सू’चना पु¥र्याए । त्यसो त अनेरास्ववियुका नेता समिक बडाल पनि आफ्नो जिल्ला काभ्रेका स्वास्थ्य संस्थामा थर्मोगन माग भएपछि खोजीमा निस्किए । उनलाई पनि बिशाल सर्जि’कलले २२ हजारमा उप’लब्ध गराउने भन्यो । उनले थर्मोगनको का’लोब’जारीको ज’रो पत्ता लगाउने क्रममा शंकर ग्रुपका संचालक नै स’क्रिय रहेको भनेर आइतबार सामाजिक संजालमा नै लेखे।
स्वास्थ्य साम’ग्रीमा भइरहेको यो का’लोबजारीको जरोसम्मै पुग्नुपर्ने निष्क’र्षका साथ महाशाखा प्रमुख थापाले स’क्रियता देखाए । उनले महाशाखाको टीमलाई शं’कर ग्रुपका सं’चालक सुलभ अग्रवालको मोवाइल नम्बरमा ग्राहकको रुपमा थर्मोगन चाहिएको भनेर सम्पर्क गरी जा’लमा पार्न सकिने तरिका अपनाउन लगाए । टीमका एक सदस्यले ग्रा’हकको भेषमा आइतबार सुलभलाई सम्पर्क गरे ।
सुलभले आफूसँग १ सय पिसमात्र भएको र प्रतिपिस १६ हजार रुपैयाँमा दिन सकिने बताए । उनले थर्मोगनको का’लोबजारी गर्दा आफूसँग १ सय पिस मात्र भएको भन्ने गरेका थिए । त्यही कुरा उनले ग्राहक बनेर फोन गरेका प्र’हरीलाई पनि गरे । ग्राहक बनेका महाशाखाका प्र’हरीले डेढ सय पीस चाहिएको बताए । उनी पहिला १ सय पिस मात्र छ भनिरहेका थिए । तर पछि १५ हजारका दरले १ सय ५० पीस नै दिन तयार भए ।
अग्रवालसँग थर्मोगनको डिल त गर्यो, तर लकडाउनका कारण महाशाखाले आवश्यक रकम जुटाउन सकेन । अ’पराध महाशाखाले यस्तै कामका लागि राखिएको सो मनी पनि बैंकखातामा थियो । पैसा जुटा’उन नसकेपछि आइतबार सामान लिन जान सकेन । चेकमा कारो’बार गर्न अग्रवाल तयार नहुने पैसा कहीँबाट नजु’टेपछि सोमबार पनि प्र’हरीले एक्सन लिन सकेन । र, मंगलबार जसरी पनि पैसा जुटाएर का’लाबजा’रीयालाई जा’लमा पार्न एसएसपी थापा लागे ।
मंगलबार १० लाख नगद र ५ लाख रुपैयाँको चेक लिएर प्र’हरी अग्रवालले दिएको लोकसनमा गए । पैसा बोकेर सादा पोशाकका प्र’हरी सामान रिसिभ गर्न तयार भएर बसेका थिए । अग्रवालले कू’टनीतिक नियोगको गाडीमा आएर थर्मोगन लिने ग्राहकको खोजी गर्न थाले । पैसा बोकेका ग्राहकले आफू नै हो भनेपछि अग्रवालले सो गाडीबाट सामान निकाले । तर चेक नलिने बरु १० लाखको मात्र ६६ थान थर्मोगन दिने भनेर निकाल्न थाले । उनले ६६ थान थर्मोगन निकाल्दानिकाल्दै प्र’हरीले उनलाई निय’न्त्रणमा लियो र सामान पनि ब’रामद गर्यो ।
प्र’हरीको फ’न्दामा परेपछि उनले आफू कू’टनीतिक नियोगको मानिस भएकाले प’क्राउ गर्न नसक्ने भन्दै ध्वाँस दिए । एकछिन त प्र’हरी अ’धिकारी अलमलमा परे । तर एसएसपी थापाले कू’टनीतिक नियोगको गाडीमा का’लोबजारीका सामान बोक्न पाइँदैन, त्यस्तालाई त झन् क’डा का’रबाही गर्नुपर्छ, जो भए पनि न’छोड्नू भनेपछि उनलाई भ्यानमा को’चेर लगिएको थियो । नि’यन्त्रणमा लिइसकेपछि सुलभले ब’लजफ्ती गरी फु’त्किन खोज्दा प्र’हरी भ्यानको लुकिङ ग्लास नै ‘फृुटे’को थियो।